Le Ministre de l’Education nationale à Antalaha – Commune Urbaine Antalaha
HomeMa villeActualitésLe Ministre de l’Education nationale à Antalaha
Le Ministre de l’Education nationale à Antalaha
Ce samedi 5 mars 2016, Monsieur Andrianiaina Paul RABARY, Ministre de l’Education Nationale malgache, était à Antalaha.
Des nouveaux enseignants ont reçu leur contrat pour devenir fonctionnaires (donc salariés de la fonction publique), mais non plus FRAM (payés par les parents d’élèves) .
Lors de cette cérémonie, Monsieur Eddie FERNAND, Maire de la Commune Urbaine d’Antalaha a fait un discours sans concession (en malgache) pour l’amélioration de l’Education Nationale à Madagascar , devant le Ministre, les responsables des établissements scolaires, et la population.
Discours du Maire d’Antalaha, le 05 mars 2016
Ianareo Olom-boafidy manankaja isany ;
Andriamatoa Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy Ianareo mpiara-dia aminy;
Ianareo Mpitondra Fanjakana rehetra isan-tsokajiny;
Ry Vahoakan’ny Antalaha tsy vaky volo;
Tompoko lahy sy Tompoko vavy.
Voninahitra lehibe ho ahy, amin’ny maha ben’ny Tanànan’ny Antalaha ahy, ary koa voninahitra maventy hoan’ny vahoakan’ny Antalaha, izao lanona hiatrehantsika izao ka handraisantsika eto androany ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena.
Miarahaba anareo ny tenako, miarahaba Tonga soa eto Antalaha ary misaotra amin’ny voninahitra izay nomenareo anay ary koa mirary fahasoavana hoantsika jiaby.
Zava-dehibe loatra amiko izany hoe: “Fanabeazam-pirenena” izany ka na dia nanana programa efa voahomana hatry ny ela ka tokony handehanako any Vohemar androany, dia tsy maintsy najanoko izany programa izany mba ahafahako mandray ny Minisitra satria efa ela no niandrasako izany minisitry ny fanabeazam-pirenena izany ho tonga eto Antalaha.
Tsy tongatonga ho azy ny nanendreko ben’ny tanànana lefitra telo miaraka amiko ka Mpampianatra avokoa. Misy dikany izany.
Amiko dia tsy ny toe-karena velively n any habetsaham-panànana no mandrefy izany hoe “FANDROSOANA” izany fa ny lanja sy ny ahamafin’ny Fanabeazam-pirenena.
Raha tsy misy na tsy ampy Fanabeazana ny Firenena iray dia, na hiodina havanana na hiodina havia dia ho sasa-poana izany fiandrasana Fandrosoana izany, na dia rakotry ny harena azan y Firenena.
Ary ny Fanabeazam-pirenena dia tsy mijanona fotsiny ihany amin’ny fanaparitahana fahaizana, na fampitàna fahalalana, na koa fifanakalozana traikefa, FA ambony lavitra noho izany: Ny foto-pisainana sy ny Fahaiza-miaina no tena volavolain’izany fanabeazam-pirenena izany.
Na dia tsy mpampianatra aza aho, fa amin’ny maha mpitondra fanjakana ahy dia anisan’ny olona mikirakira izany fanabeazam-pirenena izany koa aho.
Ka izay no ahasahiako milaza androany amin’ny Ministra izay misahana manokana izany Fanabeazam-pirenena izany fa Mbola ho sarotra ny hanabe ny Firenena Malagasy raha tsy jerenareo manokana ny programan’ny fanatsarana ny fampianarana ny “TANTARAN’NY MADAGASIKARA”.
Satria amin’iny endriny izao, ny programa mikasika ny tantaran’ny Madagasikara ka hampianarina ny ankizy Malagasy no anisany MANAKANA NY HAMBOM-POMPIRENENA, ka MANAKANA NY FIJOROAN’NY FIRENENA MALAGASY TSY VAKY VOLO TENA IZY, ka MAHATONGA NY FISARAHAM-BAZANA eo amin’ny samy Malagasy (na dia maro no tsy sahy miteny ka izay fahanginana izay dia araraotin’ireo izay minia mandainga sy mandoto ny tantaram-pirenena), ka MAHATONGA NY VAHOAKA MALAGASY MILONA TANTERAKA AO ANATIN’NY FAHANTRANA kanefa tany manakarena be (higagan’izao Tontolo izao) I Madagasikara.
Izany fahasahiana milaza ny Marina momba ny tantaran’ny Madagasikara izany, ka sahy manao azy ho programa ao antsekoly, dia FOTOTRY NY FITIAVAN-TANINDRAZANA ary SIRAN’NY AMBOMPOM-PIRENENA izay ilaintsika hampandroso an’ity Firenentsika ity.
…..Misy taranaka eropeana ny Malagasy; misy taranaka arabo ny Malagasy; misy taranaka afrikana ny Malagasy; misy taranaka aziana ny Malagasy, ary izany zaza maro be izany, miaraka, no mahatonga izany atao hoe “Malagasy” izany, satria zanaka Malagasy daholo.
Ka izay mifanohitra amin’izany dia lainga avokoa. Tsindriako mafy izany teny izany.
…..Malagasy ry Ratsimilahon’ny Betsimisaraka, kanefa zanaka angilisy;
Ry Andriandahifotsin’ny Sakalava kanefa taranaka arabo;
ry Zafinkazimambon’ny Antemoro kanefa arabo sy afrikana;
Malagasy ry karanamalandin’ny Tsimihety;
Malagasy ry Zafin’Ibrahimon’ny Sainte Marie;
Izany Andriamatoa Ministra no ANGATAHIKO MBA HAMPIANARINA ny zaza Malagasy amin’ny ambaratonga fototra na faharoa MBA HIPETRAKA MAZAVA NY AMBOMPOM-PIRENENA amin’ny maha Malagasy atsika rehetra, ka ahafahan’ity Madagasikara ity hizaka amin’izay ny Fandrosoana katsain’ny vahoaka; ary MBA HO FOANA AMIN’IZAY KOA NY FANAVAKAVAHANA (izay tadiavina afenina fa hita ihany, atao sary alevina kanefa manangatra ihany), izay manimba ny fiarahamonin’ny Malagasy ka manakana ny fivoaranan’y Firenena.
Mitodika aminareo mpanabe nahazo Contrat vaovao ho lasa mpampianatra raikitra ny tenako: Miarahaba anareo ny tenako amin’izao fahazoanareo izao Contrat izao satria hitondra soa amin’ny fiainanareo izy io, ary ezaka goavana nataon’ny governemanta ka isaorana azy manokana amin’izany.
Faly aho satria nahazo ny zavatra nijinjainareo ianareo ary REHAREHAN’NY FARITRA ianareo satria mendrika anareo tokoa izao soa mahazo anareo izao.
Fa kosa (àry hialako tsiny mialoha satria basy antifikavana izy ity ka harangaranga): Aoka tsy ataontsika ho taratasim-panjakana fotsiny ihany izy io; Aoka tsy ho hajanontsika ho resaka fanatsarana karama fotsiny ihany izy io, na koa ho lasa zavatra “mahafaly” fotsiny.
MIANGAVY ANAREO ANTANANDROA AHO mba haneho, amin’ny fihetsikareo, amin’ny asanareo, amin’ny toetranareo, manomboka izao fa zavatra “MAHAVONJY” iny Contrat ampelatananareo iny satria “ANDRAIKITRA LEHIBE VAOVAO” sy “ADIDY GOAVANA SY MAVESATRA” hapetraka aminareo mba ahafahanareo manabe ny Firenentsika.
Mikasika ny tenako manokana dia Vonona aho hanampy anareo amin’izany ezaka hanabeazantsika ny Firenentsika izany; Vonona izahay ato amin’ny Kaominina Antalaha, Andriamatoa Ministra, hanampy ny governemanta hametraka ny politikan’ny fanabeazam-pirenena tena izy, izay tadiavin’ny Filoham-pirenena ary andraindrain’ny vahoakan’ny Antalaha.
Satria, tsarovintsika hatrany hatrany, fa RAHA Fampianarana, fampitàna fahaizana, fanaparitahana fahalalana KA TSY MISY FANABEAZANA dia midika, sanatrian’ny vava…FIOMPIANA.
Tsy izany ny zavatra ho hisy fa mba tena fanabeaza-mpirenena marina no hapetrantsika.
Averiko indray: Eo ny Ministera, eo koa ny governemanta hanao ezaka amin’izany, ary hisaorana zareo manokana, Fa Eo koa isika mpanabe eto Antalaha, indrindra ianareo mpampianatra, Eo koa izahay mpitondra fanjakana hanohy sy hamboly izany ezaky ny governemanta sy ny Ministera izany, mba ho tody ventiny ny Fanabeazam-pirenena tiantsika volena, ary handroso tanteraka amin’izay I Madagasikara. Madagasikara izay hotron’ny Malagasy isankarazany tsy vaky volo, miara manarina azy satria feno ambompom-pirenena tanteraka amin’izay.
Misaotra tompoko lahy, Mankasitraka tompoko vavy.
Antalaha, faha 05 marsa 2016
Ben’ny Tananan’ny Antalaha
Les tarifs en vigueu